ဖြူးမြို့သည် ဧပြီလတွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အတွင်း အပူချိန်စံချိန်တင်ခဲ့သည့် ခုနစ်ခုမြောက် ဒေသလည်းဖြစ်လာသည်
အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကို “ဦးသိန်းစိန်စင်တာ”ဟု အမည်ပေးရန်စီစဉ်ထားပြီး ပြီးခဲ့သည့် မတ်လကတည်းက အသင်းအဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ရန် ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ဘဏ္ဍာနှစ်အကုန်ဖြစ်သည့် မတ်လကုန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ဒသမ ၄ ဘီလျံအထိ စံချိန်တင်ရရှိခဲ့သည်ဟု ပြီးခဲ့သည့် သိတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်သည့် တရားဝင်စာရင်းများအရ သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ဗဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ စီမံကိန်း ၂၁၇ ခုအတွက်.
ပြည်သူများ၏ မေ ျှာ်လင့်ချက်များ ပြည့်ဝစေရန် အစိုးရအဖွဲ့က ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်ဟု ဦးထင်ကျော် ပြောကြား
အကျဉ်းသား ၈၃ ဦးအား ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ပြစ်ဒဏ်များမှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်သည့် အမိန့်စာကိုလည်း သမ္မတဦးထင်ကျော်က ယနေ့လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ရန်ကုန်က ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်သာသနာဟာ လူနည်းစုသာ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားဖြစ်ပေမယ့် ရိုးရာဓလေ့နဲ့ လူမှုအသိုက်အဝန်းမှာ နက်နက်နဲနဲ အမြစ်တွယ် နေပါတယ် ဂျာရတ် ဒေါင်းနင်း ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ – မာရို ဗာလီ ပဲခူးမြို့ကို ရောက်ရှိလာတဲ့ ပထမဆုံး ရိုမန်ကတ်တလစ် ဘာသာရေး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး Adoniram Judson.
အင်န်အယ်လ်ဒီအနေနဲ့ မီဒီယာနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာ ဦးသိန်းစိန်ခေတ်က အစိုးရရဲ့ မီဒီယာဆက်ဆံပုံတွေနဲ့ ထူးမခြားနား ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဝေဖန်သံတွေ ထွက်ရှိနေပါတယ်။ မတ်လ ၁၅ ရက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးထင်ကျော်ကို သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ် တင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနေ ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ်ကို တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ ကတိတွေ.
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို အမှတ်ရဖွယ် ဖြစ်စေမယ့် ခရီးစဉ်တွေ
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးလာချိန်တွင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက Burma Campaign နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် သီးသန့်ခရီးစဉ်များကို ခရီးသွားလုပ်ငန်းအချို့က စီစဉ်ပေးလာကြသည်။ အိုလီဗာ ဆလိုး ရေးသားသည်။ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းမကြီး တစ်ဖက်တွင်ရှိသော စစ်သချိုင်းတွင် နံနက်စောစော လမ်းလျှောက်နေကြသော မြန်မာလူငယ် နှစ်ဦးကို တွေ့ရသည်။ တန်းစီနေသော အမှတ်အသား ကျောက်တိုင်များအတိုင်း.